(Last Nohavaozina: 31/12/2019)
Hianao va no karazana olona tia tongotra sy fiara fitateram-bahoaka Tours? Ary ity lahatsoratra ity dia tsy ho anao! Isika dia mihevitra fa ny fomba tsara indrindra mba hahita ny sasany amin'ireo toerana malaza Eoropa dia amin'ny alalan'ny sipping Champagne amin'ny tampon-trano lavarangana na Cafe. Ireto misy tampon-trano tsara indrindra trano fisakafoanana sy ny trano fisotroana kafe tany Eoropa mba afaka nahita-mahita amin'ny fomba.
Rehefa in Roma, dia mila mahita ny toerana tsara tarehy sy ny fahiny - tahaka ny Colisée, na ny Dobo Trevi. Fa ianareo koa mba manana ny manana fomba fijery tsara tarehy tao an-tanàna. ary, tampon-trano, rehefa nitsidika ny hidin'i Atlante Star Hotel manana fomba fijery roa firenena. Izany no mahatonga antsika mihevitra fa iray amin'ireo toeram-pisakafoanana tsara indrindra tampon-trano sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa!
Fast fiaran-dalamby avy any London ho any Roma hitondra manodidina 14 ora, nandrakotra lavitra ny eo ho eo 1,434 kilaometatra. Misy matetika ny tolotra momba ny rail lalana eo London sy Roma. Lamasinina Ary noho izany dia misokatra ho an'ny famandrihana matetika manodidina 12 volana mialoha. Raha misy famandrihana tsy mbola misokatra ho an'ny daty dia afaka mametraka famandrihana mailo hahazo mailaka tamin'ny andro izay mora indrindra tapakila dia navoaka ho amin'izay haleha avy any London ho any Roma lamasinina. Use Save A Train au livre haingana sy mora!
Fa iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny toe-tsain'izy Paris, doha niakatra ho any amin'ny tampon-trano ny Galeries Lafayette trano fivarotana. Rihana fito ny, 1500m izany lavarangana manome ny tena manaitra 360 ° View over Paris. Ny Opera House dia akaiky dia akaiky sy ny Tour Eiffel dia ny resahana. Saingy tsy momba ny fomba fijery, ny lavarangana ihany koa ny manana ny maoderina sady tsara tarehy tampon-trano fisotroana antsoina hoe The Cube Bar.
Open-rivotra sy ny voajanahary amin'ny fametrahana, Manolotra ny lavarangana ny seza na amin'ny masoandro sy ny faritra mitafo kokoa ao amin'ny alokaloka. Avy amin'ny tampon-trano fisotroana, dia afaka hanafatra ny labiera mangatsiaka, mamelombelona Molotov miaraka amin'ny sasany Paris izay ahitana fitambaran tsakitsaky. Izany no antoka iray amin'ireo toeram-pisakafoanana tsara indrindra tampon-trano sy ny trano fisotroana kafe any Eoropa, dia ho fotoana tsara mba haka toerana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-res...nts-cafes-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)